कवितालाई हस्पिटालिटी कन्टेस्टको ताज – Todaypokhara
कवितालाई हस्पिटालिटी कन्टेस्टको ताज
दोस्रो संस्करणको हस्पिटालिटी नेपाल कन्टेस्टको ताज १८ वर्षिया कविता पौडेलले जितेकी छिन् । पब्लीक च्वाईसको सबटाइटलसहित बिरौटाकी कविताले ताज जितिन् ।
नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेनमा बिएचएम दोश्रो बर्षमा अध्ययनरत उनले ताजसँगै एक लाख पचास हजार खर्च पर्ने दुबई भ्रमणको अवसर पाएकी छिन् । साथमा विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर समेत पाइन् ।
प्रतियोगितामा मोस्ट ट्यालेन्टेडको सबटाइटलसहित बिश्वदिप थापा फस्ट रनरअप भए । छोरोपाटनका २१ वर्षिय थापा पोखरा लिङ्कन कलेजमा बिएचएम तेश्रो बर्षमा अध्ययनरत छन् । उनले सिक्किम भ्रमण जाने पुरस्कार जितेका छन् । बुटवलकी १९ वर्षिया रुबी रानामगरले सेकेन्ड रनरअपमै चित्त बुझाइन् । उनी वेस्टन मेगा कलेजमा बिएचएम दोश्रो बर्षमा अध्ययरत छिन् ।
पोखरा लेकसाइडकै २० वर्षका उज्वल बहादुर कार्की थर्ड रनर अप भए । उनी पनि बिएचएम. तेश्रो बर्षका विद्यार्थी हुन् । भियुअर्स च्वाईसको अवार्ड भने नुर पुनले जिते । पोखराको पाँचतारे होटल पोखरा ग्राण्डमा आइतार अबेर सम्पन्न भएको प्रतियोगिताको मुख्य निर्णायकमा पाइलट तथा कलाकार विजय लामा थिए ।
लामासँगै निर्णायकमा संञ्चारकर्मी दिनेश डिसी, एजुकेशलन कन्सलटेन्ट तथा युवा ब्यबसायी राजमान थकाली, पर्यटन ब्यबसायी तथा नाटाको अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल, माउन्ट अन्नपुर्ण कलेजका प्रिन्सिपल सैलेन्द्रराज श्रेष्ठ, डा. स्नेदा मैनाली, बाटिका होटलका अपरेशन म्यानेजर सुधन अधिकारी र एम्स कलेजका प्रिन्सिपल दिपक ढकाल रहेका थिए ।
प्रतियोगिलाई परिचय राउण्ड र प्रश्न उत्तर राउण्डबाट उत्कृष्ट ८ छनौट गरिएको थियो । ती ८ जनालाई लेखन तथा वाककलाको प्रस्तुति देखाएपछि बिजेता, उपबिजेता लगायतका छानिएको थियो । प्रतियोगितामा फस्ट रनरअप र सेकेण्ड रनरअपले सिक्किम भ्रमणको मौका पाउँदा सबैको फाइभ स्टार होटलमा जागिरको सुनिश्चितता गरिएको आयोजक एपी इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन पाण्डेले जानकारी दिए ।
पोखरा सहित बुटवल र काठमाण्डौ अडिसनबाट २७ जना प्रतियोगी छनौट गरी उनीहरुलाई विभिन्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । पोखरामा भएको पहिलो अडिसनमा २८ जनाबाट २४ जना छानिएको थियो । बुटवलमा भएको दोस्रो अडिसनबाट ६ जना छनौट भए । काठमाण्डौबाट एक जना छानिएका थिए ।
तस्वीर ः सुरज श्रेष्ठ